FAQs - Yantai Tonghe Precision Viwanda Co, Ltd.
Mubvunzo: Kurumidza Kusimudza kamwe kamwe kunorasikirwa nesimba panguva yekushandisa, michina ichawira ipapo ipapo?
A: Haizoiti. Mushure mekundikana kwesimba kwesimba, michina inozo gadziridza iyo voltage uye nekuchengetedza nyika panguva yekushaikwa kwemagetsi, kana kusimuka kana kudonha. Chikwata chemagetsi chakashongedzerwa neyevharuvhu yekumanikidza yekumanikidza. Mushure mekumanikidzwa kwekumanikidza, michina inowira zvishoma nezvishoma.
Pls zvinoreva vhidhiyo.
Mubvunzo: Inokurumidza kusimudza kusimudza yakasimba here?
A: Kugadzikana kweKusimudza Kwakakwirira kwakanaka kwazvo. Iyo michina yapasa CE chitupa, uye chikamu mutoro bvunzo mumativi mana ekumberi, kumashure, kuruboshwe, uye kurudyi, zvese zvinosangana neEC standard.
Mubvunzo: Ndeupi hurefu hwekusimudza hweKusimudza Simudza? Mushure mekunge mota yakasimudzwa, pane nzvimbo yakakwana pazasi yebasa rekugadzirisa mota?
A: Kurumidza Kusimudza chimiro chakakamurwa. Mushure mokunge motokari yakasimudzwa, nzvimbo yepasi yakazaruka zvachose. Iyo shoma chinhambwe pakati pemotokari chassis uye pasi i472mm, uye nhambwe mushure mekushandisa pakukwirisa maadapter ndeye 639mm. Iyo yakagadzirirwa nerepa bhodhi kuitira kuti vashandi vagone kuita nyore mabasa ekugadzirisa pasi pemotokari.
Mubvunzo: Inground Lift iri nyore kuitisa?
A: Inground Lift zviri nyore chaizvo kuti Nokuraramisa. Iyo yekudzvanya sisitimu iri mune yemagetsi yekudzivirira kabhineti pasi, uye inogona kugadziriswa nekuvhura musuwo wekabhini. Injini yepasi pevhu chikamu chemakanika, uye mukana wekukundikana wakaderera. Kana rin'i yekuisa chisimbiso mumafuta esirinda ichida kutsiviwa nekuda kwekukwegura kwechisikigo (kazhinji anenge makore mashanu), unogona kubvisa ruoko rwekutsigira, vhura chifukidziro chekumusoro chekoramu yekusimudza, tora humburumbira yemafuta, uye tsiva rin'i yekuisa chisimbiso .
Mubvunzo: Chii chandinofanira kuita kana Inground Lift isingashande mushure mekuiswa magetsi?
A: Kazhinji, zvinokonzerwa nezvikonzero zvinotevera, ndapota tarisa uye bvisa zvikanganiso chimwe nechimwe.
1.Iyo simba unit tenzi switch haina kuvhurwa, Tendeuka main switch kune iyo "yakavhurika" nzvimbo.
2.Power unit inoshanda bhatani rakakuvara, Tarisa uye kutsiva bhatani.
Simba reUse rakatemwa, Unganidza huwandu hwesimba remushandisi.
Mubvunzo: Chii chandinofanira kuita kana Iground Lift ichigona kusimudzwa asi isingadzikiswe?
1.Isa kukwana mweya kumanikidza, mechina kukiya haivhure, Tarisa kuburitsa kumanikidza kwemhepo compressor, iyo inofanirwa kunge iri pamusoro pe0.6Ma, Tarisa mhepo wedunhu kutsemuka, kutsiva iyo pombi yemhepo kana mhepo yekubatanidza.
2.Ivhavha yegasi inopinda mumvura, zvichikonzera kukuvadza kwoil uye gasi nzira haigone kubatana.Iyo inotsiva yemhepo vharuvhu coil kuve nechokwadi chekuti oiri-yemvura yekuparadzanisa yemhepo compressor iri mune yakajairika mamiriro ekushanda.
3.Unlock humburumbira kukuvara, kutsiva kiinura humburumbira.
4.Electromagnetic yekumanikidza yekuzorodza vharuvhu coil yakanganisika, Tsiva iyo yemagetsi rezororo vharuvhu coil.
5.Down bhatani rakakuvara, Tsiva pasi bhatani.
6.Power unit line mhosva, Tarisa uye gadzirisa iyo tambo.
Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza,